Enwere ụzọ ọhụụ ọ ga - esi wulie redlinks ikike dị elu maka azụmahịa e-azụmahịa?
Ka anyị chee ihu na ya - iwuli elu backlinks ikike PR abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa gbasara ụlọ ahịa na-e-commerce. Ihe bụ na ugbu a ọtụtụ n'ime usoro ochie ịke na-adịghị arụ ọrụ dị mma. Kedu ihe ọzọ - nke ahụ nwere ike ibute ọdachi maka ọrụ ị na-azụ ahịa e-commerce. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-edepụta ọtụtụ ụlọ ọrụ egosipụtara na ọdịnaya na ụzọ ndị isi nke ịga nke ọma iji mezuo n'ikpeazụ iji nweta backlinks CS maka ụlọ ahịa weebụ gị.N'ebe a, ha bụ - nduzi nduzi, ọkachamara ọkachamara, na blọọgụ ndị ọbịa.
Ma n'ihu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị lelee ya ọzọ - ihe ahịa ahịa azụmahịa na-anọchi anya - 2 host vps. Cheta, SEO na-agwakarị anyị na ọdịnaya dị mma bụ eze, ọ dị mma? Ya mere, ụlọ ọrụ njikọ! Ekwuru m na ọ bụghị naanị maka ịmepụta ihe dị mma. Iji nweta nkwado dị elu nke ndị nweghachiri na ọdịnaya gị, ịchọrọ atụmatụ dịka nke a:
chọpụta ihe mgbaru ọsọ gị - ịhọrọ n'etiti okporo ụzọ na ntọghata;
na-eche banyere "ezigbo onye ahịa," mkpa, mmetụta, na ebumnuche ya;
chọọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ịbịachị ha;
udi ihe kachasị mkpa ma mee ka ọ mara mma;
echefukwala ịrụ ọrụ na njikarịcha ọdịnaya tupu ya agaa;
kwalite ma weghachite isi ihe nke ọdịnaya gị;
mee usoro nhazi oge maka mbipụta n'ọdịnihu.
Ọ dịghị ihe na-enye aka ịmepụta nkwado dị elu nke ndị nweghachiri ikike dịka nke a na-eme nke ọma ma mee nchọpụta nke ọma.M na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnụ ezigbo olu nke ụlọ ọrụ ahụ - gịnị kpatara na ọ gaghị abụ gị mgbe niile? Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ itinye ego na mgbalị iji mepụta otu. Enwela obi nkoropụ, Otú ọ dị, ọ bụ na ị ghaghị ịghọ olu pụrụ iche. Chee n'onwe gi dika onye nkuzi ma obu onye nchikota - chikota ihe nile ma nye ndi mmadu ihe kacha mma. Ọ bụrụ na ị ka na-atụle nke a dị oke ego nke oge gị, ana m emesi gị obi ike na n'oge na-aga, onye nduzi siri ike ga-ewetara gị ikike backlinks dị elu nke PR na ogologo oge.
Nlekọta ọkachamara abụghị naanị ụzọ a ga-esi gosipụta iji nweta akara azụmaahịa dị elu ma na-arụ ọrụ nke ọma ma mee ka mmekọrịta dị ike na ndị na-ege gị ntị. Na ihe niile dị mfe karịa ka ị nwere ike iche n'ihi na aghụghọ bụ ịhọrọ ihe ziri ezi na okwu gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ nsogbu. Ọzọ, họrọ otu ajụjụ maka ndị ọkachamara ịza. N'ụzọ dị otú ahụ, buru n'uche na ebumnuche gị bụ inye azịza zuru ezu ma ọ bụ ihe ngwọta site na nkwụsị nke otu nsogbu. Ozugbo emere ya - nanị ịkpọbata ndị ọkachamara na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ma emechaa gị.
Ịmepụta ọdịnaya kachasị mma maka akwụkwọ ndị a na-ebipụta n'ịntanetị abụwo ụzọ doro anya maka inweta ụfọdụ backlinks dị elu nke PR.Dị ka akwụkwọ ahịa ochie na ụlọ ahịa, akwụkwọ nchịkọta ndị ọbịa bụ mmekọrịta bara uru nke na-enye ohere dị iche iche na-emekarị n'akụkụ abụọ. E nwere ebe ebe etiti etinyere gị ọdịnaya. Na ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịmepụta mmekọrịta dị mma na ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị nwere ike ime, mee ka ha hụ ọdịnaya gị, bipụ ya, ma mee ka ọ bụrụ na ị ga-enweta ihe ndị dị mkpa na ndị na-elekọta gị.